Somalia: Kiiskii u horreeyay ee dhimashada Corona Virus | Berberanews.com
Home WARARKA Somalia: Kiiskii u horreeyay ee dhimashada Corona Virus
Dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dhimashadii ugu horreysay ee uu sababay coronavirus ay ka dhacday magaalada caafimadda ah ee Muqdisho.
Wasiirka caafimaadka dawlada federalka soomaliya Fowziya Abiikar Aaadan ayaa xaqiijisay in qof la xanuunsanayey coronavirus uu ku geeriyoodey gudaha Soomaaliya.
Qofka geeriyooday wuxuu ahaa Muwaadin soomaaliyeed oo 58 jir ah,kaasoo ku geeriyoodey Cisbitaalka Martiini.
Shalay ayaa laga soo qaaday mid ka mid ah cisbitaallada Muqdisho halkaas oo uu ku xanuunsaday. Waxaa intaas dheer in aanu dibadda ka iman ee uu ahaa qof magaalada Muqdisho deggan.
Waxay sidoo kale Wasiirku sheegtay in 4 kiis oo cusub oo coronavisus ah la diiwaan galiyay.
Geesta kale, Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub oo lagu baadhayo dadka ku dhinta Magaalada, iyadoo qofkasta oo ku dhinta magaalada Muqdisho uu marayo baadhis la xidhiidha sababta uu u dhintay.
Sidaasi, waxa ku dhawaaqay Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee Gobolka Banaadir Basma oo u warantay wariye ku sugan Magaalada Muqdisho.
Previous articleDr Edna oo sheegtay inay Dalka Dibeddiisa u dirtay Shaybaadhka lagu ogaado Cudurka Covid-19
Next articleSomaliland oo oodda ka qaadday 50 qof oo karantiin ku jiray